विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकः चार्ल्स डार्विन – Sourya Online
विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकः चार्ल्स डार्विन
मिलन आफन्त २०७६ पुष २८ गते ६:३४ मा प्रकाशित
चार्ल्स डार्विन व्रिटेनको प्रकृति वैज्ञानिक थिए । उनले जीवको क्रमिक विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाथिए । उनीभन्दा महिला यो विश्वास गरिन्थ्यो कि पृथ्वीमा अलग—अलगजीवहरूको उत्पत्ति अलग—अलग रूपमा भएको थियो र त्यो रूपबाट केही पनि परिवर्तन भएका थएनन् । उनले यो धारणालाई गलत सिद्ध गरे र आफ्नो अध्ययनको आधारमा यो सिद्ध गरेकी सबै जीवजन्तुहरूको आजको रूप कुनै एउटा सरल प्रणीबाट भएको हो , जुन करोडौँ वर्ष पहिला पृथ्वीमा जन्मेको थियो
विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनको जन्म सन् १८०९ मा इंग्ल्यान्डको शुजवरी भन्ने ठाउमा भएको थियो । उनको पिता डाक्टर थिए भने उनी ८ वर्षको हुँदा उनको आमा परलोक भएकी थिइन् । ८ वर्षको उमेरदेखि मातृवात्सल्यबाट विमुख भएका चाल्र्स डार्बिनको रेखदेख उनकै सबैभन्दा ठूली दिदीले गरेकी थिइन् ।
चार्ल्स डार्विनका पिताले उनलाई डाक्टर बनाउन चाहन्थे तर उनको ध्यान भने जीव र वनस्पतितर्फ बढी थियो । उनले बाल्यकालमा नै आफ्नै घरमा एउटा प्रयोगशाला बनाएका थिए । बालककाल देखि नै उनलाई कीरा, फट्यांग्रा र अनेक किसिमका खनिज जम्मा गर्ने उनको ठूलो शौख थियो । उनी रसायनशास्त्रको सरल प्रयोग पनि गर्ने गर्दथे । स्कुलमा पढ्दा पनिउनी पढाइमा भन्दाकीरा फट्यांग्रातर्फ रूचि राख्दथे । आफ्नो छोराको क्रियाकलापबाट डार्विनका पिता चिन्तित हुने गर्दथे ।
चार्ल्स डार्विनलाई आयुर्विज्ञान अध्ययनको लागि एडिनबरा विश्वविद्यालयमा पठाइयो । जुन समयमा उनी मात्र १६ वर्षका थिए । उनी अत्यन्तै संवेदनशील स्वभावका हुनाले चिकित्साशास्त्रप्रतिउनीलि नहुन सकेनन् । त्यस समयमा बेहोस पार्ने औषधी नभएकोले मानिसको अप्रेसन निर्दयीतापूर्वक गर्नु पर्दथ्यो, जसबाट उनीअत्यन्तै डराउने गर्दथे ।
जस्को फलस्वरूप अन्ततःउनले आर्युविज्ञानको अध्ययनमा सफलता पाउन सकेनन् । सन् १८२८ माउनलाई एडिनबरा विश्वविद्यालय छाडेर आध्यात्मशास्त्र अध्ययनको लागि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय पठाइयो । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा पढ्दा पनि यिनी आध्यात्मशास्त्रभन्दा भ्रुण ( द्यभभतभिक) जम्मागर्न पट्टि लागे र उनले आफ्नो विषयमा डिग्री हासिल गरे । डिग्री हासिल गर्ने समयसम्म उनले विश्वविद्यालयमा वनस्पतिशास्त्र र भुगर्वशास्त्रमा धेरै वैज्ञानिकहरू उनका प्रियपात्र बनिसकेकाथिए ।
चार्ल्स डार्विन सन् १८३१ माएउटा सनौलो मौका पाए । क्याप्टेन फिजरोयको रेखदेख र नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डको बीगल नामको समुन्द्रीजहाज सन् १८३१ मा नै संसारको वैज्ञानिक यात्रामा जानु परेको थियो , जसमा एउटा प्रकृति वैज्ञानिकको पनि आवश्यकता थियो । त्यस प्रकृति वैज्ञानिकको ठाउँमा उनका साथीहरूले चाल्र्स डार्विनको नाम सिफारिस गरे ।
जस्को परिणाम स्वरूपउनीपाँचवर्ष लामो वैज्ञानिक यात्रामा दक्षिण अमेरिका ,न्यूजिल्यान्ड , अस्ट्रेलिया र अन्य राष्ट्रको भ्रमण गरे । त्यस समयमाउनीजम्मा २२ वर्षकाथिए । वैज्ञानिक यात्राको क्रममा डार्विनले विश्वका विभिन्न जीवजन्तुहरूको अध्ययनगर्ने मौका पाए, जसबाट विकासवादको सिद्धान्त पत्तालगाउन उनलाई सजिलो भयो ।
चार्ल्स डार्विन व्रिटेनको प्रकृति वैज्ञानिक थिए । उनले जीवको क्रमिक विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाथिए । उनीभन्दा महिला यो विश्वास गरिन्थ्यो कि पृथ्वीमा अलग—अलगजीवहरूको उत्पत्ति अलग—अलग रूपमा भएको थियो र त्यो रूपबाट केही पनि परिवर्तन भएका थएनन् । उनले यो धारणालाई गलत सिद्ध गरे र आफ्नो अध्ययनको आधारमा यो सिद्ध गरेकी सबै जीवजन्तुहरूको आजको रूप कुनै एउटा सरल प्रणीबाट भएको हो , जुन करोडौँ वर्ष पहिला पृथ्वीमा जन्मेको थियो । त्यही प्राणीबाट सबै बोटविरूवा र जन्तुहरूको उत्पति भयो र एक क्रमिक विकार्स त आजको योरूप धारण गरेको हो ।
चार्ल्स डार्विनले सन् १८३९ माएम्मा बेजबुड नामकी महिलासँगविवाह गरेकाथिए । उनका १९ वटा बच्चाहरू जन्मे भने ७ वटा मात्रजीवित रहे । उनका ४ छोराहरू उच्च श्रेणीका वैज्ञानिक थिएभने ३ जना छोराहरू रोयल सोसायटी अफ लन्डनका फेलो नियुक्त भए । २० वर्षको अथक मेहनतबाट सन् १८५८ माचाल्र्स डार्विनले अल्फ्रेड रसेल बेलेससँग मिलेर संयुक्त सोध पत्रनिकालेकाथिए ।
१८५९ माउनको प्रसिद्ध पुस्तक ‘दओरिजन अफ स्पेशीजवाई नेचुरल सेलेक्सन”प्रकाशित भयो । जुन छाप्ने बित्तिकै सबै बिक्रीभयो । उनले १८६८ माँद बेरियेशनअफएनियल्स एन्ड प्लाण्टस् अंडर डोमेष्टिकेशन’ प्रकाशित गरे जसमाउनले जीवको विकासबारे आफ्नो वैज्ञानिक धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक कृतिहरूमा ‘इन्सेक्टी बारे अन्तलाट्स’ ‘डिसेंट अफम्यान’ पर्दछ । जीवकोविकास कसरी भयो भन्ने विषयमा सबैभन्दापहिले वैज्ञानिक ढंगबाट प्रष्ट पार्न वैज्ञानिक चाल्र्स डार्विन नै हुन् । आफ्नो कठोर अध्ययन , अनुसन्धानबाट मानिसको विकास वनमानिस (एक प्रकारको बाँदरबाट ) भएको थियो भनेर ठोकुवागर्ने वैज्ञानिक पनिचाल्र्स डार्विन नै हुन् ।
यस्ता महान वैज्ञानिक पनि सन् १९ अप्रिल १८८२ देखि हाम्रो सामु रहेनन् । ७४ वर्षको पाको उमेरमा विभिन्न वैज्ञानिक मान्यताहरू दिएर चाल्र्स डार्विन सदा सदाको लागि विदा भए । उनलाई न्यूटनको समाधि नजिक वेस्ट मिनिस्टर ऐवमा गाडियो । महान् वैज्ञानिकःचाल्र्स डार्विन हाम्रो माझ हुनुहुन्न तर आफ्नो वैज्ञानिकीत्वले उहाँ सदा सर्वदा वैज्ञानिक संसारमा चम्किरहनु हुने कुरामा कुनै शंका छैन । विश्व प्रसिद्ध महान् वैज्ञानिक चाल्र्स डार्विन सदा सदाको लागि अमर हुनु भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
नेपालसँगको व्यापारमा चिनियाँ अवरोध कहिलेसम्म ?
एमसिसी, इन्डोप्यासिफिक रणनीति र विश्व लोकतान्त्रिक सम्मेलन
संघीयता लागू भयो पुनः स्थापित भएनन् अपभ्रंशित स्थाननामहरू
एमालेको आठौँ महाधिवेशन वा प्रतिगमन र अभिनायकवादको पूर्व अभ्यास ?
को को हुन् अबैध सम्पत्ति कमाउनेहरू ?
‘जय नेपाल’ को ठाउँ ‘दर्शन हजुर’ले लिँदाको परिणाम भोग्दै कांग्रेस
पुलिसमा जागिर नखाएर भो ?
केका आधारमा ठोरी र माणी अयोध्या ?
एनआरएनएले जित्यो सरकारविरुद्धको मुद्दा
कांग्रेस महाधिवेशन : जिल्लागत परिणाममा देउवा नै अघि
एमाले महाधिवेशन : ओलीको देवत्वकरण, टिके प्रथाको सुरुवात
एमाले १० औँ महाअधिवेशन : यी हुन् ओलीले प्रस्ताव गरेको एमाले पदाधिकारी
जनअपेक्षा र १०औँ महाधिवेशनका तीन कार्यभार